नारायणी काण्ड-सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन भन्दै जेठानीले खोलिन् सबै वास्तविक कुरा (भिडियोसहित) – News Nepali Dainik
नारायणी काण्ड-सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन भन्दै जेठानीले खोलिन् सबै वास्तविक कुरा (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १२, २०७७ समय: २१:१४:५३
***चितवनमा फेरी एक पटक अर्को घटना घटेको छ । जुन घटना यतिबेला हाम्रो समाजमा प्राय घटि रहेकै पाउँछौं । यो वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा श्रीमान विदेश गएको र श्रीमानले कमाएको पैसालाई नेपालमा बसेकी श्रीमतीले हिनामिना गरेको सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा धेरै घटनाहरु घटिरहेका छन् । यो तीनै घटना मध्यको एक हो । बाक्ष्लुंग घर भएका कुल प्रसाद उपाध्याय पौडेलकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले श्रीमानको माटो रकम हिनामिना गरिदिएपछि श्रीमानले आफ्ना कुरा मिडियामा राखेका छन् ।
****आफ्नै श्रीमतीले आफ्नै कमाई खाँदा पनि कसरी हिनामिना भयो भनेर आरोप लगाउन सकेको होला भन्ने प्रश्न त छंदै छ । साथै उनको श्रीमतीको लुगा र चप्पल जब नारायणी नदीमा भेटियो तब भने घटनाले अर्को मोड लियो । श्रीमान कुल प्रसादको भनाई अनुसार उनले विदेशमा कमाएको ५ लाख रकमलाई श्रीमतीले हिनामिना पारेकी छन् । के श्रीमानको कमाई देखाउनु पर्छ भनेर होला त ? उनको श्रीमतीले नारायणी नदीको तिरमा आफ्नो लुगा र चप्पल फ्याँकेर श्रीमानलाई भ्रममा पार्न खोजेको ?
*#*श्रीमान विदेशबाट फर्किएपछि घर छाडेकी श्रीमती सरस्वतीको नारायणी नदीमा ज्याकेट र चप्पल भेटिएको थियो । यो घटना हो कुल प्रसाद उपाध्याय र सरस्वती श्रेष्ठ उपाध्यायको । श्रीमानको भनाई अनुसार उनी कतारबाट नेपाल फर्किएपछि रु ५ लाखको हिसाब माग्दा श्रीमती सरस्वतीले घर छाडेकी थिईन् । उनले घर छाडेपछि उनको खोजी गर्दै जाँदा उनले लगाएका लुगा र चप्पल नारायणी नदीको किनारमा भेटिएको थियो ।
*#*#सरस्वतीको लुगा र चप्पल नारायणी नदी किनारमा भेटिंदा भने उनका श्रीमान र आफन्तीहरु सरस्वतीले नदीमा हाम फालेर देह त्याग त गरिनन् भन्दै निकै नै डराएका पनि थिए । तर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सरस्वती जीवित नै रहेको कुरा पत्ता लागेको छ । उनको अर्कै केटासंग अ’नैति’क स’म्बन्ध रहेको कुरा उनकै जेठानीले खोलेकी छन् । जेठानीको भनाई अनुसार सरस्वतीको चरित्र ठिक थिएन । उनी पहिलादेखि नै खराब बानी र व्यवहार देखाउँदै आई रहेको कुरा उनकी जेठानीले बताएकी छन् ।
Last Updated on: January 25th, 2021 at 9:14 pm